निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप, सरकारीमा हालत ! | newdnn.com
२३,मंगलवार १८:३८ Sangita Rai
कुसुम विश्वकर्मा/ संगीता राई – मानिसका लागि शिक्षा एक गतिशिल र परिवर्तनशिल प्रक्रिया हो । प्राचिन कालमा विभिन्न तरिकाबाट लिइने शिक्षा अहिले नीतिमा रहेर व्यवस्थापकीय ढंगले अगाडी बढिरहेको छ । शिक्षाले गर्दा नै मानिसहरु चन्द्रमामा पुग्ने यन्त्र मात्र नभई विभिन्न किसिमका विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार गरि विश्वमै चमात्कार गरिरहेका छन ।
तर रात दिन नभनि यही शिक्षा सिकिरहेका हामी कहाँ छौँ ? प्रश्न सोचनीय छ । हाम्रो शिक्षा संख्यात्मक रुपमा दैनिक बढेपनि गुणात्मक रुपमा भने अझै विकसित हुन सकेको छैन । हाम्रो शिक्षालाई भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षले धेरै प्रभाव पारेको छ । किनकी अति विकट ठाउँहरुमा पुस्तक समयमै नपुग्नु, दक्ष शिक्षक–शिक्षिकाको कमी, र विद्यार्थी पढ्ने राम्रो विद्यालयको अभावले हाम्रो शिक्षा अहिले पनि विकास र बहसकै केन्द्रविन्दुमा छ ।
समाधानमुखी हुन सकेको छैन । सहरी क्षेत्रमा केही विकसित र आधुनिक भएपनि अहिलेको शिक्षा दुर्गम भेगमा भने समस्याग्रस्त नै छ । अहिले पनि आर्थिक रुपमा जो सक्षम छ, उनीहरुका छोराछोरी व्यवस्थापकीय ढंगले उत्कृष्ट निजी विद्यालयमा पढिरहेका छन । दिन दुःखी मानिसहरुका छोराछोरी सरकारी स्कुलमा पनि ढुक्कले पढ्न सकिरहेका छैनन । तर विडम्बना भनौँ, राज्यले शिक्षामा खरबौ लगानी गरेपनि समान उपलब्धि हात पर्न सकेको छैन ।
निजीमा आकर्षण, सरकारीमा हालत
लगानी धेरै र पढाइको गुणस्तर पनि राम्रो हुने भएकाले सरकारी विद्यालयमा भन्दा अहिले निजी विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्न अभिभावकलाई भ्याई नभ्याई छ । सरकारी विद्यालयमा शिक्षकको क्षमता भन्दा पनि लापरबाही हावी छ भने शिक्षकहरुको राजनीतिले शिक्षाकै सिमा क्षेत्र नाघिसकेको छ ।
विद्यार्थीका लागि सिकाईको केन्द्रविन्दु बन्ने विद्यालय र क्याम्पस हिजो आज केटी जिस्क्याउने, राजनीतिका लागि टाउको फोड्ने र जीवन जिउने कला र सीप अनि गुणस्तर भन्दा चिट चोरेर पास हुने होडबाजी सरकारी विद्यालयका विशेषता मानिएका छन ।
उचित ज्ञान, सीप, प्रभावकारी शिक्षण सिकाई र भएको बजेट पनि सही उपयोग हुन सकेको छैन । सोही कारण पनि सरकारी शिक्षाको अवस्था दिनानुदिन ओरालो लाग्दो छ । निजी विद्यालयमा शिक्षकको बढी नियन्त्रण हुने भएकाले सबै विद्यार्थी एकरुपता भई पढाइ तिर केन्द्रित हुन सफल छन ।
अभिभावकको मोटो लगानी र विद्यालयको कडा प्रसशासकीय नीतिले गर्दा पनि निजी विद्यालयमा विद्यार्थी अध्ययन गर्न बाध्य छन । भलै घोकन्तेका नामले आलोचित निजी विद्यालयको शिक्षण सिकाईले प्रमाणपत्रमा देखिने प्राप्ताङकले स्वंयम विद्यार्थी र अभिभावकको मन जितिरहेको छ ।
तर सरकारीमा थोरै लगानी, आर्थिक अभाव सँगै शिक्षकहरु विद्यार्थीप्रति विकेन्द्रित र मनोमानी प्रवृत्तिले समस्याग्रस्त छन । त्यसैले पनि सरकारी विद्यालयमा आश लाग्दो नतिजा छैन ।
निजी र सरकारीमध्ये लगानी कस्को बढि ?
सरकारी विद्यालयको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा च्याउ उम्रेजस्तै खोलिएका निजी विद्यालयमा विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण बढ्दो छ । निजी विद्यालयमा लगानी बढि नभईकन शिक्षण सिकाई र व्यवस्थापन राम्रो भएर हो । निजीको तुलनामा सरकारी विद्यालयमा नै लगानी धेरै छ । तर नतिजा भने निकै निराशाजनक छ । सरकारीमा शिक्षकको तलब राम्रो छ । सरकारले विद्यालय भवन बनाएको छ तर ती व्यवस्थित छैनन ।
संगै शिक्षकलाई तालिम, प्रोत्साहन भत्ता लगायतका धेरै अवसर पनि सरकारी विद्यालयकाहरुले पाएका छन तर त्यसलाई उपयोग गर्न सकेका छैनन । निजी विद्यालयमा व्यक्तिको आफ्नो छुट्टै लगानी भइरहेकाले शिक्षक देखि लिएर विद्यार्थी अभिभावक सबै सक्रिय रुपमा लागि परेका छन । निजीमा बसेको पद्धतिले समग्रमा नतिजा सुखद निस्किरहेको छ ।
तर सरकारीमा भएको लगानीको उपयोग नहुँदा अवस्था विकराल बनेको छ । सरकारी विद्यालयको अवस्था यति नाजुक हुनमा राज्य सत्ता सम्हालेका र शिक्षाका सरोकारावालाहरुले आउने पुस्ताका लागि सोच्ने भन्दा पनि आफु अनुकुल स्वार्थ मात्रै पुरा गर्ने प्रवृत्ति पनि त्यत्तिकै हावी छ ।
सबै सरकारी विद्यालय खस्केका छैनन !
आर्थिक रुपमा विपन्न विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने थलोका रुपमा हिजोआज सरकारी विद्यालयको परिचय दिइने भएपनि सबै सरकारी विद्यालयको अवस्था भने खस्किएको छैन । केही विद्यालय निजीको तुलनामा पनि उत्कृष्ट छन । तर जति विद्यालय उत्कृष्ट छन ती निकै थोरै र हातका औलामा गन्न सकिने मात्रै छन ।
देशका कुनाकाप्चामा रहेका सरकारी विद्यालयको अवस्था उस्तै नभएपनि कम्तीमा आम नागरिक र उनीहरुका छोराछोरीले आधारभुत शिक्षा पाइरहेका छन । सरकारी विद्यालयमा सर्वाङगीण विकासका रुपमा खेलकुद र व्यक्तित्व विकासका धेरै अवसर भएपनि त्यसको व्यवस्थापन भने फितलो छ ।
यस्तै बालबालिकाका लागि बालमैत्री कक्षाकोठा शौचालयको व्यवस्था र सोच सरकारीमा हुने भएपनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । सरकारी विद्यालयमा शिक्षकहरुको राजनीतिक शैलीको पठनपाठनले विद्यार्थीले बीचमै पढाई छाड्ने गरेको अर्को समस्या छ ।
यो संख्या बर्षेनी बढ्ने गरेको भएपनि सरोकारावालाहरुले उचित रोकथामका उपाय नलगाउँदा समस्या घट्न सकेको छैन ।